China otomatiki Door Spray Washer Mugadziri uye mutengesi | Shinva
Rapid-A-520 otomatiki Washer-disinfector ndeye yakakwira inoshanda yekuwachisa michina yakatsvaga nekuvandudza maererano nechipatara mamiriro chaiwo. Inoshandiswa zvakanyanya kugezesa uye kutapudza utachiona zvezvinhu zvekuvhiya, zvigadzirwa, zvekurapa uye mahwendefa, zviridzwa zveanesthesia uye hosi yekombi muchipatara CSSD kana nzvimbo yekuvhiya. Kubatsira kukuru kwemidziyo kuchengetedza-nekukurumidza kushamba yekumhanyisa iyo inogona kupfupisa 1/3 nguva yekushanda kupfuura nakare kose.
■ Dhizaini yepamusoro yekamuri uye maitiro
Iyo conical kamuri muSUS316L inotambanudza ichiumba panguva imwechete isina yakafa kona uye kuwina majoini, iri nani pakunyorovera zvakanaka uye kuchengetedza mvura.
■ Intelligent control system
Double mativi otomatiki akatwasuka akamira zvishoma nezvishoma mumatope mikova, inodzorwa nekubata skrini, iri nyore uye chengetedzo. Maitikiro maitiro akangwara anodzorwa nePLC, hapana chikonzero chekudzora kwevashandi. Yese tembiricha, kumanikidza, nguva, matanho enhanho, alarm inogona kuratidzwa pane inobata skrini uye zvakarekodhwa nemaprinta akavakirwa.
■ Mapurogiramu akasiyana siyana
11 zvirongwa zve preset uye makumi maviri neshanu-anotsanangurwa mushandisi zvirongwa anogona kutsanangurwa zvinoenderana nezvinodiwa nemushandisi
■ Kutakura nekuburitsa zviri nyore
Chinyorwa kana otomatiki masystem ekurodha uye kudzikisa aripo. Kushambidza rack, kuendesa trolley uye kuburitsa system, inowirirana neyakagadzirwa neergonomics, nyore kushanda uye kuiswa.
■ Kuchengetedza magetsi
Kushambidza kamuri ine yakanaka mvura yekuponesa chimiro; Pre-kupisa mvura matangi uye yakakosha yakagadzirirwa kukwira uye kupisa sisitimu uye pombi dhizaini inoita kuti ichengetedze 30% mvura uye simba rekushandisa kupfuura nakare kose.
■ Kukurumidza uye kwakanyanya kushanda
Rapid-A-520 ndeimwe yeiyo inokurumidza washer-disinfector mupasi, iyo yakajairwa kutenderera nguva yakaderedzwa kusvika makumi maviri nemasere kusanganisira pre-kuwacha, kuwacha, 1 kusimuka, 2nd kusimuka, disinfection uye kuomesa. Zvichakadaro iyo inogona kugadzirisa gumi nemashanu DIN trays pamhepo.
Mvura preheat system yakadzora nguva yekugadzirira, hapana nguva yekumirira panguva yekutenderera kumhanya.
Pashure: Otomatiki Flexible Endoscope Washer Disinfector
Zvadaro: Yakakwira Energy Medical Electron Linear Accelerator
Hydrogen peroxide kaseti
Yakatungamira-Yemahara Steam Sterilization Indicator Tepi
Neutral Multienzyme Kuchenesa Agent Kwekurapa ...
Zvoga tireyi Anotakura Ultrasonic Washers
Manera trolley (Matanho maviri)
Dhiraini musuo unowirirana kutamisa hwindo